I-Geofumadas: iminyaka eyi-30 ye-AutoCAD kunye ne-Microstation - ii-Geofumadas
Epreli, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Emva phantse 30 kweminyaka kwezi nkqubo zimbini, nto leyo ngokuqinisekileyo kubonakala ukuba ngomnye bambalwa abaya kusinda imbali elide kangaka kwindaleko, ndiye ixesha ingqalelo umba ukubonisa amanye milestones ibalulekileyo kule nkqubo, siya Masikhumbule oko kwenzekayo kunye noko sinokukucinga ngexesha elifutshane.
Ngokubanzi, zombini iinkqubo zisesigxina esifanayo kodwa ngeendlela ezihlukeneyo zokuthengisa kunye nophuhliso. Zombini zaqala iinkqubo ezincedwa uyilo, emva koko zaye adlala iilayini ezithe nkqo ngokwaseburhulumenteni, AutoDesk waba ethandwayo ngokwaneleyo ukuba phezu enkulu emarikeni Architecture ekubhekiselwe and Engineering, ukuzifaka lukhulu ngoku kwihlabathi multimedia kunye Manufacturing . Nangona Bentley wasala kunye ezincinci, nolugqale kakhulu kwiinkampani ezinkulu kubunjineli, izakhiwo kanye mveliso izityalo candelo. Kuba oko kuquka imiba ethile efanelekileyo imarike apho iinkqubo ezifana CATIA, Pro / IGENEER kunye UniGraphics babe isibonda enkulu nangona ibonakala kancinci kokusingqongileyo.
Ngexesha le-4 iminyaka i-AutoCAD ithatha inzuzo enkulu ngokuziqhelanisa nabasebenzisi bekhompyutha. Ecaleni likaBentley, akukho nto yayikho, ngaphandle kweyodwa ngaphambili I-Intergraph kunye nobuchwepheshe obuphezulu bokusebenza kwii-Main Frames okanye iikhomputha ze-mini ezixhunyiwe kwisigxina semifanekiso.
Kwi-1979, umgangatho we-IGES uyadalwa.
1980 I-AutoCAD 1.0 inguqulelo
Azalwe inkqubo MicroCAD, ngoko NGOKU (1978) kwathiwa, yaphuhliswa Mike Riddle e SPL waba ngowokuqala ukuba isebenze abakwizikolo ebalekayo kwi computer ekuthiwa Marinchimp 9900 (abanye benza kanye xa izakhelo eziphambili okanye microcomputers). I 16 Cofounders AutoDesk ukuba athenge kwaye kwakhona C kunye PL / 1 ulwimi ekujongwe ukukhuthaza i-software CAD for PC endiwazuze US $ 1,000.
Yayinye yeenkqubo ze-CAD zokuqala ukuqhuba kwi-PC.
Ukususela kwiminyaka elishumi edlulileyo, iCATIA yasinda, eyabonakala kwi-1977 kunye ne-Unigraphics esuka kwi-1971, ekufuneka ibe yimikhosi kwi-Design Mechanical Design. IGDS Editor, nge-Intergraph
Ngoxa i-Intergraph yinkampani ephuhlise ubugcisa obuphezulu kwi-1969Nkqu inkqubo yakhe yaba iifomati umhleli angabizi for Interactive Graphics Design System (IGDS) minicomputers Super 1980 VAX.Antes inkqubo CAD yeendleko US $ 125,000, 512 Kb zokukhumbula ngaphantsi kwe 300 MB disk.
Ngokuza kwee-PC, i-IBM ne-64k ye-RAM ibiza i-US $ 5,000.
1981 I-AutoCAD 1.2 inguqulelo
Kwabandakanya ukudibanisa okongeziweyo kunye nokukhangela, kunye nentlawulo eyongezelelweyo.
1982 I-AutoCAD 1.3 inguqulelo
Lo AutoCAD nyaka linikwa kwi COMDEX njengoko inkqubo CAD yokuqala eyehlayo phezu PC, ngoko kwathiwa AutoCAD 80 kunye AutoCAD 86, ebhekisela PC ubiza 8086, nangona iyafumaneka ezithengiswayo de 1983.El menu ixhasa ngaphezu kwe40 izinto, isikhombisi sibonakala okokuqala, iiparameters eziyisiseko zenziwe ukushicilela kwizicwangcisi. Amanani alinganiselwe kumbala.
Kulo nyaka uCADPlan wazalelwa waza kamva wabizwa ngeCADVANCE. I-CATIA Ndiyasungulwa kulo nyaka.
II Ixesha lexesha I-AutoCAD kule minyaka eyi-4 idala izicwangciso zamazwe ngamazwe, ifikelela kubasebenzisi be-50,000 kwaye iya kuthiwa yiprogram yeCAD engcono.
Okwangoku, i-Microstation yayingekho njengaye, kodwa yayiyi-Pseudostation eyaba ngumhleli wefayile ye-IGDS kwi-PC ngaphandle kwemfuneko yokusebenzisa iinkqubo ze-Intergraph.
1983 I-AutoCAD 1.4 inguqulelo
Kuze kube unyaka iinguqu ze-AutoCAD 1.2, i-1.3 kunye ne-1.4 zikhutshwa
Umbhalo wokuqala we-AutoCAD ngolwimi lwesiJamani. Ixabise i-$ 1,400, ukhuphiswano lwaluyi-VersaCAD eyayivela kwi-1980.
Ezinye iinkcukacha kwiimigaqo ezifana ukucoca, i-arc, i-array. Amazwe avela ortho, igridi, i-snap. Iibhloko ezintsha kunye nemiyalelo ibonakala i-axis, iiyunithi, i-hatch, ikhefu, ifayile. Kulo nyaka ubonakala iMigangatho yokuTshintshiselwa kweDode yomfanekiso wedatha ye-STEP.
1984 I-AutoCAD 2.0 inguqulelo
Kulo nyaka i-AutoDesk yoQeqesho yoQeqesho ivela.
Imiyalelo emitsha: isibuko, i-osnap, iimbono ezikhethiweyokunye neetometric.Kulo nyaka, i-CATIA yayiyinkokeli kwinjini yobunjineli. PseudoStation
I-emulator ithuthukiswe yinto enokuba yinkqubo yokufunda kuphela iifayile ze-IGDS kwiikhompyuthile zobuqu ngaphandle kokusebenzisa isofthiwe ye-Intergraph. Lo nyaka uKeith Bentley ufumanisa iBentley Systems.
1985 I-AutoCAD 2.1 inguqulelo
I-AutoDesk ikhuthaza i-CADCamp yokuqala, ukuthengisa kulo nyaka kufinyelele kwi-US $ 27 yezigidi. Izixhobo zokuqala ze-3D zivela.
Imiyalelo emitsha: qhekeza.
Lo nyaka ufika kwi-MiniCAD, inkqubo yokusabalalisa kakhulu kwimimandla ye-Mac.
1986 I-AutoCAD 2.5 inguqulelo
Le nguqulo yenzeke kakhulu, imilayezo yokuhlela ngaphezulu ibonakala: Hlukanisa, Hlaziya, Uwandise, Ulinganise, Ulinganise, Ulungelelanise, Ujikeleze, Isilinganiselo, Sula, Hlawula.
I-AutoLisp ifika enepropati engaphezulu. I-AutoDesk ifinyelela iilayisenisi ze-50,000 ezithengiswa kwihlabathi jikelele. Ukususela kulo nyaka, kunye ne-10 iminyaka i-AutoCAD iphumelela njengeprogram ye-CAD engcono kwi-PC World Magazine.
Lo nyaka kumhlaba we-Mac ubonakala u-Deneba ukuba kunye ne-MacLightning iya kuba yi-Canvas. I-Microstation 1.0
Le yinguqulo yokuqala ye-Microstation ekwazi ukusebenza kwiikhompyuthi zabantu, ngoku iguqule ifomathi ye-IGDS. Yayizihlandlo ze-IBM 80286 PC.
III Ukunyuswa kwee-bits 32
Ngeli xesha, i-AutoDesk ifinyelela kubasebenzisi abayizigidi ukuthenga abasebenzisi beGenericCADD. Ubuye uthenge iSoftDesk kunye nale Drafix eqala ukuyiqala njenge-AutoSketch. I-Microstation ikhula kwaye iba nabasebenzisi be-100,000.
Zombili i-AutoCAD kunye ne-Microstation zikhona kwiinguqulelo ezininzi.
1987 I-AutoCAD 2.6 inguqulelo
Ukuphrinta okuphucukisiwe kunye ne-3D, le yinguqulelo yokugqibela eyasebenza ngaphandle kwepropro-processor. I-AutoDesk yenza izivumelwano zokuqala kunye nezicelo ezicacileyo (SoftDesk).AutoCAD Release 9.0
Abaninzi bakubiza ngokuba yi-AutoCAD 3, ubuso be-3D bubonakala. Iibhokisi, ibhokisi yencoko, ibha yemenyu.
Ukhuphiswano: MiniCAD kunye ne-Architron (Mac)
I-CADVANCE iba yiprogram yokuqala ye-CAD ye-Windows. I-Microstation 2.0
Le yinguqulo yokuqala ekwazi ukufunda nokuhlela ifom ye-dgn eyayiquka inguqulo ye-IGDS kunye nezandiso ze-Bentley Stystems.
I-AutoCAD yayinabasebenzisi be-290,000 kwaye ithenge iG genericCADD eyayinabasebenzisi be-850,000. Ngaloo nto wakwazi ukuqalisa iphulo lakhe "Sinabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ze-1" I-Microstation 3.0
1989 Kulo nyaka intsha entsha ye-standard STEP yavela, ihamba ngesandla kunye ne-Unigraphics, eyayijoliswe ekuxhaseni iiplatifti ezivela kumthombo ovulekile.Kwakhona kulo nyaka, i-AceCAD yi-software yokuqala ye-CAD yoyilo lwezakhiwo. Kwakhona i-T-Flex, ekuthiwa yi-ACIS kamva, inkqubo yokuqala yokucinga i-parametric design kunye neyokuqala yePro / ENGINEER.
Lo nyaka ufika uGraphiSoft, oza kuxhasa ngokutsha i-ArchiCAD.
I-MicroCADAM ivela, eya kuba yinkqubo ye-CAD ephakamileyo kakhulu eJapan.
I-AutoDesk uthenga i-AutoSketch esuka kwi-SoftDesk. Microstation Mac 3.5
Uhlobo lokuqala Microstation for Mac.
AutoCAD kwi-PC kunye AutoCAD kwi-Mac, Indawo yePhepha kunye nomxholo wezakhiwo ezibonakalayo. Ukuphucula i-3D nge-ACIS, kodwa ngeentlawulo ezongezelelweyo. Iimpawu zenziwa, ngokubonakala kweefowuni, rhoqo kwi-DOS.
I-AutoCAD ingaqhuba kumncedisi.
Ngeli xesha, i-AutoDesk izama ukungena phakathi kwe-animation nge-AutoDesk Animator Studio.
Kulo nyaka, i-Intergraph yinkonzo yesibini ye-CAD / CAM / CAE e-United States kunye neyesibini kwihlabathi.
I-AutoDesk yayiyinkokeli kunye neekopi ze-500,000 ze-AutoCAD; 300,000 kwi-Generic CADD kunye ne-200,000 kwi-AutoSketch.
Kulo nyaka nangethuba le-8 elandelayo, i-AutoCAD iphumelele ukufaneleka kweprogram ye-CAD engcono nge-Byte umagazini. I-Microstation 3.5 ye-UNIX
1991 Uvavanyo lokuqala lwe-AutoDesk ukungena kwendawo yendalo kunye ne-ArcCAD. Kwakhona isicwangciso sokuqala se-AutoCAD kwiipulatifomu ze-SUN. Lo nyaka uMicrosoft wenza i-OpenGL, eyaba ngumgangatho kwi-3D yokuthunyelwa kwedatha.
Kwimimandla ye-Mac, i-Canvas ipapashwa ngokusetyenziswa kwe-Apple System 7. I-Microstation V4 (4.0)
I-Microstation isebenzisa izixhobo ezininzi ezibandakanyayo: izicingo, izikhokelo, ukutsalwa kweembonakalo, amagama omgangatho, umguquleli we-dwg. Inguqu ebizwa ngokuba yi-Nexus yayiquka umguquleli we-dwg kunye nokukwazi ukuqhuba kwi-Windows 3.1.
Uhlobo lokuqala kunye nolwimi lwe-MDL.
UBentley uxela ukuba abasebenzisi be-Microstation baye bafikelela kwi-100,00.
IV Ulwabiwo lweWindows
Iminyaka eyi-4 elandelayo ibonakalisa ukunyuka kweWindows, i-AutoDesk igxila kwi-PC kwaye ilahlela i-Linux kwi-1994.
I-AutoDesk ingena kwiMakethe yokuThengisa ne-Architecture.
I-Microstation ifezekisa abasebenzisi be-200,000 kunye ne-detraps kwi-Intergraph. I-AutoCAD ifezekisa izigidi ze-3 zabasebenzisi.
I iingxelo zangaphandle,iimpawu zonyuka, ukunikezelwa kubonakala kwaye kwandiswe ukuxhuma kunye neziseko zeSQL. I-AutoDesk iqalisa i-3D Studio 2 ye-DOS inguqulelo ekhoyo yakamuva ye-Mac.
I-Comdex ivula i-Canvas yeWindows.
Kwi-DOS kunye neenguqulelo ze-Windows 3.1, i-3D ACIS Modeller ehlanganisiweyo inguqu yakutsha ye-UNIX.
I-AutoDesk ithola iSixEngineering Solutions, umdali we-AutoSurf.
I-SolidWorks Inc. isekelwe kulo nyaka
Iinkampani ze-16 zikhuthaza iFomatic Vector Format (SVF) eyenzelwe njengefomathi ye-intanethi. I-Microstation V5 (5.0)
I-Microstation idibanisa ama-rasters ekuphatheni kwindlela yokwenza ibhonari, izitayela zeendlela eziqhelekileyo, imithintelo kunye nokubala kwe-centroid. Yagijima ngokukodwa kwiWindows NT.
Le yinguqu yokugqibela apho i-Microstation ibonwe phantsi kwebhendi kunye nezixhobo ezenziwe yi-Intergraph.
Kwi-Windows 95 kunye ne-DOS, nge-interface efana nezinye iinkqubo ezisebenza kwiWindows. I-Autodesk igqiba ukungavuli iinguqulelo ze-Mac.
I-AutoDesk iqalisa iinkqubo zokufumana i-AutoArchitect ne-Softdesk egijima kwi-clone ye-AutoCAD.
I-AutoCAD ifezekisa abasebenzisi abayizigidi ezilodwa njengesoftware kuphela, ilandelwa yiCadkey kunye ne-180,000 kunye ne-Bentley 155,000.
I-Canvas ifumana i-Win100 Award esuka kwiWindows Magazine. Bentley babenabasebenzisi be-155,000.
1995 I-AutoDesk, nge-AutoSurf ibandakanya ukuguqulwa komgangatho we-IGES. Kwakhona kufaka imodeli yohlobo lwe-AutoDesk Designer.
Thenga iindlela ezizenzekelayo, ukungena kwihlabathi le-GIS. I-AutoDesk idlulisela ukuba iikopi ezigidi ezintathu zathengiswa kwaye iba yinkampani enkulu ye-software enkulu kwihlabathi.
Lo nyaka ufika kwiMedusa, kwi-DOS ne-UNIX ezandleni zeComputerVision.
Pro / Engeneer yinkqubo CAD ucikizeko parametric izakhono kuqala nokugqama 3D ehambelanayo ne Windows NT kwaye kulo nyaka isaziwa njenge inani 1 kuyilo ngoomatshini. I-Microstation 95 (5.5)
MicroStation uqala 5.5 version, ukusebenza yokuqala 32 amasuntswana kweli xesha windows95, izixhobo AccuDraw (ivele), iifestile yababini, pop-IZIXHOBO, key-in umkhangeli zincwadi, ukubaleka iifayile ezininzi, SmartLines, iimbono ezizimeleyo baziswa , ivelisa oopopayi (movie).
Inkqubo eyisiseko ifakiwe, inkxaso ye-ODBC kunye neyokuqala ye-Microstation Modeler kwi-Architecture esekelwe kwi-ACIS.
UBentley uxela abasebenzisi be-200,000.
V Imigca efana
Ngexesha le-3 iminyaka i-AutoDesk kunye ne-Bentley bafuna ukugcina ingqwalaselo yabo ephambili kwimigca engaphaya kwe-CAD elula noko ifomathi ye-32 bits. I-AutoCAD iyeka ukubizwa ngokuba yiyona ndlela i-CAD engcono, igcina imigca ezinzileyo kwi-Architecture, Engineering kunye neMechanics.
I-Bentley ifuna ukukhuphisana kwi-Architecture kunye neZityalo, kwi-1997 icima iMac ne-UNIX.
I-AutoDesk iqalisa i-Desktop ye-Desktop 1.1.
I-Canvas neTurboCAD ikhona kwi-Mac ne-Windows.
Kulo nyaka iDataCAD ivela, uFelixCAD uhambelana ne-AutoCAD.
IP / E ivula ifom yeVRML ye-Intanethi.
I-Bentley ingena kwi-Architecture kunye neZityalo ze-Industrial. Ichongiwe kumgca we Geoengineering kwaye uqalise okokuqala ngethuba inkqubo yokubhaliselwa ye-SELECT ekhoyo esuka kwi-1990 njengeCSP.
Kwi-Windows NT kunye ne-95. I-AutoDesk iphakamisa ifomathi ye-DWF yokusetyenziswa kwe-intanethi.
Kuze kube lusuku iinguqu ezahlukeneyo ze-14 zenziwe, enye ngonyaka.
Iinguqu zeDOS ziphela.
It discontinues GenericCAD kunye AutoCAD LT Kucetyiswa ukuba iindleko $ 500 na ukuba uthenge na ivenkile computer ngexesha bookmark us kuphela abasasazi of AutoDesk.
I-DataCAD kunye ne-MiniCAD, ixabiso elipheleleyo libiza i-$ 4,000. Pro / ndibiza i-26,000 nayo yonke iimodyuli ze-26 kunye ne-UniGraphics 17,000 kwiimodyuli ze-30.
Ngokuthengwa kweSoftDesk AutoDesk kuqala ukuqaliswa kweenguqu ezibonakalayo zobunjineli.
Kulo nyaka, iqhinga leMarComp ukuya kwidemokhrasi ifomathi ye-dwg iqala. Eli phulo liphela xa iMicrosoft ithola inkqubo yeVisio eyayisisigxina se-AutoCAD.
I-Canvas iyona software esetyenziswa kakhulu kwiimifanekiso kwi-cinema. Lo nyaka uphela ukuba yinxalenye yenkampani eyasungula iSolidWorks. I-Microstation SE (5.7)
MicroStation uqala 5.7 eyaziwa ngokuba Special Edition nguqulo ne iqhosha icons imibala kunye nenkangeleko ezinemiphetho ukuya Office2007 style amandla iswitshi kuqaliswa, unxibelelwano engeneering, ole unxulumano kunye nokusebenza sebenza kwi-Intanethi.
I-Bentley iqala ukusebenza ne-Model Server. UDaratech uluhlu phakathi kweenkampani ezikhulayo ngokukhawuleza kwi-CAD / CAM / CAE inguqu yakutsha ehambelana ne-Mac ne-Linux.
1998 Kulo nyaka i-OpenDWG Alliance izalwe kwiilayibrari ezishiywe nguMarComp. I-AutoDesk iqalisa iDeskectectural Desktop ngokusekelwe kwi-AutoCAD 14.
Lo nyaka unyaka wokuqala we-IntelliCAD uphuma, kwimizamo yeVisio.
VI Iifayili ze-64 zifika
Ngethuba leminyaka elandelayo ye-9, i-AutoDesk ne-Bentley iyaqhubeka nokwandisa abasebenzisi babo abakhethekileyo kunye nokuphucula imisebenzi yabo ngokuthenga ubuchwepheshe obutsha. I-AutoDesk iqala ukugcina ifomathi ye-dwg engaphezu konyaka, amanye amaqabane ayo afana ne-Eagle Point ayidlulise kwimakethe ye-AEC. I-Microstation ivula iV8 kwaye ifuna ukutsala abasebenzisi be-dwg ngokufunda ifomethi ngaphandle kokuguqulwa.
1999 I-AutoCAD 2000 (R15)
Kwi-Windows 95, NT, 2000. I-paperspace iba intuitive ngakumbi ngokuqaliswa kwayo iindlela ezininzi, kwaye kuphucula umveliso ngokusetyenziswa kwebhokisi elifanelekileyo, ekhangele ukunciphisa ikhibhodi.
format Dwg 2000 yagqugqisa okokuqala ngaphezu konyaka omnye AutoCAD kunye AutoCAD 2000.AutoCAD 2002i 200LT ngaphandle 3D okanye Autolisp.
I-Ad-Architectural-inxaxheba njengentambo evela kwi-GenericCADD ebeyithengiwe yi-AutoDesk. I-Microstation J (7.0)
I-Java idibaniswe nolwimi lophuhliso, libizwa ngokuba yiJMDL, elishiywe kwi-8 version, inkxaso kwi-QuickvisionGL. I imodeli eqinile. Iilayisenisi ezifanayo kwi-Model Server.
I-Microstation J (7.1)
I-spell checker, inkxaso kwi-Windows 2000. Qalisa iProjectBank, eyayiza kuba yiWindows Wisely.
Le nguqulo yeefayile ezibizwa ngokuba yiDgn V7 yileyokugqibela esekelwe kwi-IDGS, i-V8 isekelwe kwi-IEEE-754.
Kulo nyaka i-Upside Magazine amagama aseBentley kwii-1998 100 iinkampani ezishisayo zokubeka indawo. UBentley uxela abasebenzisi be-300,000 kunye ne-200,000 kwi-SELECT.
AutoDesk idibanisa imisebenzi kwi-intanethi. Ngethuba lokuqala ungathenga i-AutoCAD kwi-inthanethi kunye nesaphulelo ukuya kwi-15% yexabiso kwivenkile.
Ngaloo nyaka, i-AutoCAD 2000i LT yaphuma ukukhuphisana ne-IntelliCAD.
I-Eagle Point yayiyinkokeli e-AEC. U-Alibre ungena ngamandla angaphezulu. IGraphisoft ifumana iDrabBase. I-TurboCAD ifinyelela kubasebenzisi abayizigidi.
2001 I-AutoCAD 2002 (R15.6)
Drag & drop, maqela ogciniweyo wezohlu. Imisebenzi yoncedo lwe-intanethi idibeneyo.
AutoCAD 2002i ($ 135) ukukhuphisana ne-IntelliCAD. I-Microstation V8 (8.0)
Ifomathi entsha yeV8 isungulwa ngokusekelwe kwiibhitana ze-64, funda kwaye uhlele i-dwg / dxf natively, ifayile yomlando, i-acusnap. Izithintelo zisuswa kumanqanaba (izalathisi), cwangcisa kunye ubukhulu beefayile.
Ngexesha lo kuqala ulawulo lwendlela xa ufaka iifayile zemihla. Inkxaso kuMnuSID.
Iprogram ye-VBA idibeneyo kwaye inokusebenzisana neNET.
Olunye uphuculo lwenziwa kwifom ye V8, njengoluhlu lweeyunithi zokusebenza, isixa sinyani.
2002 Lo nyaka u-AutoDesk uthengisa iinkampani eziphuhlise ubugcisa be-Revit ne-Inventor ye-BIM ukuhlanganiswa.
2003 I-AutoCAD 2004 (R16)
Izixhobo zokuvakalisa zidibeneyo (ngaphambili zazingekho kwiSoftdesk).
Ifom ye-DWG ye-AutoCAD 2004 yaqhubeka kwi-AutoCAD 2005 kunye ne-AutoCAD 2006.
Kulo nyaka, i-AutoDesk ikhipha zonke iinguqulelo ze-AutoCAD ngenyanga kaMatshi. Microstation V8.1
usayino lwedijithali, kunye ifayile yokuvikela ogama izinto usebenzisa unyaka groups.Este OpenDWG Alliance Open Design Alliance utshintsho kwaye kwenziwa ngokungqinelana Bentley ukuxhasa OpenDGN nokwandisa ngaphaya ingcaciso elula iifayile CAD ibandakanyiwe.
2004 I-AutoCAD 2005 (R16.1)
I-CADstantard ibonakala, i-dwg iyancipha. Ininzi imilaphu idlula kumgca womyalelo ukuya kwiifestile kwaye iphucule ngakumbi ukuphathwa kwamalungiselelo. I-Microstation V8 2004 Edition (8.5)
inkxaso iifomati ezintsha DWG 2004-2006, CADstandard lihlaziywa kwaye iyasebenza multiple-ivele kunye nokudala iifayile PDF kunye 2D 3. XFM ithe yaziswa njenge neempawu imodeli-based, le kuguqulelo lokugqibela lowo ukunyamezeleyo MicroStation evela Bentley Imephu XM ebizwa uguqulelo esekelwe XFM.En uqala ukusebenzisana kunye ADT U3D yaye kamva kuvunyelwa ukuba asebenzise AutoDesk Adobe
I-Bentley ithengisa iindlela zokuHlaba kunye nokufaka zonke iindlela zokupakisha zendlela entsha yeV8.
2005 I-AutoCAD 2006 (R 16.2)
Iibhloko ezinamandla kunye neetafile zivela. Iphucula ukulungelelanisa nokusingatha kweendwangu ngaphandle kwewindow ephumayo. Ulawulo lweetabhu zepropati luphuculwa kwaye i-DWF isekela ukuhlaziywa.
AutoDesk uthenga iMaya kunye neSketchbook.
2006 I-AutoCAD 2007 (R17)
Thatha ubuso obutsha bokuboniswa kwe-3D, oku kuthetha ukuphucula imidwebo, ukunikezelwa, ukuboniswa kwezilwanyana kunye nezinye izibonisi.
Ukuqulunqwa kwe-3D kuphelile ukuba kuvela kwizinto zakudala kunye nomgaqo 3D imizekeloIfom ye-2007 DWG yaqhubeka kwi-AutoCAD 2008 kunye ne-AutoCAD 2009. I-Microstation V8 XM Edition (8.9)
Kuphuhliswe kwiziko leNET. Iingxelo ze-Integra zangaphandle PDF, ixhasa i transparent, itemplates yezinto, i-Pantone kunye neRal color management.
I-navigator yomsebenzi oyimfuneko idibeneyo.
I-XM yakhululwa njengentuthuko yesikhashana, enethemba lokubuyisela kwakhona oko iV8 esele yenzayo kunye neenzuzo zokutshintshwa kwenkqubo yeskrini esebenzayo ngokusekelwe kwi-Direct-X. Inkxaso yeWindows Vista kunye nenkxaso ye-DWG 2007-2008.
2007 I-AutoCAD 2008 (R 17.1)
Umbhalo wokuqala we-AutoCAD ohambelana nee-64 bits.
Ukuhlanganiswa okuphuculweyo kunye nezinye iiprogram ze "no cad", ukutsha ngokutsha nokukhangela. I-Bentley ithola i-RAM kunye ne-STAAD ukuze ithathe indawo yomgca wendlela yokwakha ukuqaliswa kwe-V8i.
VII Izizukulwana ezizayo
Iminyaka yokugqibela ye-4 ibonise iziphumo zesivumelwano sokusebenzisana kwe-AutoDesk kunye ne-Bentley kwimigca ye-Architecture, Engineering kunye ne-Animation. Bobabini bazama ukulungelelanisa ukuthambekela kwabo nge-geospatial inkxaso kunye ne-BIM modeling. I-Bentley isekelwe kwi-XFM, ukuxubusha kuphela kwiZityalo ze-Industrial, i-AutoDesk kunye nezinto ezinamandla kunye nokwenza ngaphakathi kwimveliso yefilimu kunye ne-animation.
Ukubuyisela kwakhona umbane kunye nokufakwa kweRibhoni.
Ngokuqala i-AutoCAD ingangenisa ifayile ye-dgn, kodwa ayiyikuyihlela.
Iinkalo zokusebenzisana nedatha efana ne-ViewCube kunye ne-Record Recorder zongezwa.
Lo nyaka u-AutoDesk ubizwa ngokuba ngumbolo ye-25 phakathi kweenkampani ze-50 ezininzi zehlabathi jikelele.
AutoDesk ifumana iSoftImage. I-Microstation V8i (8.11)
izixhobo design 3D, iimbono onamandla, ukuxhasa lwehlabathi ukuququzelela iinkqubo (nje phambi Geographics), inkxaso DWG 2009 .Soporte RealDWG, ukusebenzisana kunye neefomathi GIS kuphela inkxaso Bentley Map (shp, mif, phakathi, tab). Inkxaso yokusebenzisana ne-pdf kunye ne-reference shp (ngaphambili yabonwa njenge-raster). Ikhono lokushicilela ulwazi kwi-I-models.
Idibanisa amandla okusebenzisana neGPS.
Iimbono ezinamandla kunye nezilungelelwaniso ezincedisayo zidibaniswe ngombono.
Lo nyaka uBentley kunye ne-AutoDesk basayina isivumelwano sokutshintshana amathala eencwadi kwi-dgn kunye nefwg ifom kunye nokusebenzisana okukhulu.
Ifom ye-DWG ye-2010 yaqhubeka kwi-AutoCAD 2011 kunye ne-AutoCAD 2012.
Ukuqulunqwa kwemimiselo, imodeli yee-3D, ukuxhaswa kwe-Windows 7 kwi-32 kunye ne-64 bits iyaziswa.
Inkxaso yokuthunyelwa kwi-PDF uze uyibize ngokubhekiselele ekuqaphelisweni kwendawo.
Lo nyaka u-AutoDesk ufumana inkampani yokudala yento esiyibiza ngokuba yi-AutoCAD WS ngokuya kwiifowuni zefowuni. I-Microstation V8i Khetha i-Series 1 Inkxaso yamafu. I-DWG 2010 kunye neFBX.
Ukuphuculwa kwongezwa ekusebenzisaneni namanye amafomathi, inkxaso Ukushicilelwa kwe-3D.
I-Bentley ithengisa i-GINT ukudala umgca we-geotecnia. Ngomnyaka we-Bentley ifakiwe phakathi kweenkampani ze-500 ezineempahla ezinkulu kwiziseko zophuhliso kwihlabathi jikelele.
Ukungabonakali kwezinto, uhlalutyo lomhlaba kunye nohlalutyo lomhlaba.
Ukufihla / ukuhlukanisa izinto, ukusebenza kunye nezinto ezifanayo, inkxaso amafu amaqondo.I-AutoCAD 2011 ye-Mac
I-AutoCAD ibuyela kwi-Mac emva kokuyiyeka kwi-1994. I-Microstation V8i Khetha i-Series 2
I-Bentley iqala ukunikezwa kwe-I-model njengesiphakamiso sokumisela iBIM kwifom ye-dgn.
Inkxaso ifu yefayile.
La Vula iNdibaniso yoBumbe Uqala iTeigha SDK kunye namalungu angaphezulu kwama-1000 kumazwe akwa-40. Ezi ziquka i-Adobe, iBricSys, iCarson, i-ESRI, i-GraphiSoft, i-IntelliCAD, i-Intergraph, iVectorWorks, i-Oracle, i-Software Safe, i-SolidWorks, i-
Ubunxulumano obuninzi buqaliswa kwizinto kwiimpawu kunye namaqela. Uyilo loxwebhu, ukucocwa kwezinto eziphindwe kabini.
Umgca womyalelo uphinde uhlaziywe kunye nophando olululo. I-Bentley ihlose ukuvelisa uphuhliso olutsha phakathi kwe-2011, apho i-i-models iqhubeka njengemilinganiselo yokusebenzisana nayo yonke imveliso yayo nangaphandle kwimigca ye-Architecture kunye nobunjineli be-AutoDesk.
Legrafu ephuculwe emva kokuthunyelwa kwayo UShaan ngokukhawuleza phantse 26 lushwankathela iziganeko kwimbali AutoCAD, yimani amanyathelo njengokuba ebalulekileyo njenge: Ukulindela umsebenzi we computers zobuqu, ukuthenga abasebenzisi GenericCAD ukufikelela kwisigidi esinye, ukukwazi ukusasaza jikelele kwaye unuka ukuba bafumane ubugcisa ezinokwenzeka. Ihlala ikhokela kodwa ingabi ngeemveliso ezidibeneyo ngokupheleleyo, kodwa i-Maya, i-WS kunye ne-foray yayo kwihlabathi le-Mac.
Elinye igrafu ichaza milestones 13 Bentley waqonda ngomjikelo kuquka phakathi 14 kunye 18 neempawu ezichazwe ngasentla. Phakathi izenzo ukuba ume ngaphandle izigqibo njengobuhle, kukusetyenziswa yeefomati kuphela 3 ngalo lonke ixesha esasebenza (nangona oku kubonakala kuye kwasilela usebenzisa 64 parameter V8), ukukwazi layo ukuhlela lweenkobe DWG DXF format / kunye wit ukulungelelanisa yonke imigca yayo kwiifom ezisebenzisana ngaphandle eBentley. It libe lisalele ngasemva ethandwa nangona envididables ipotifoliyo baxhamli kukho izinga eliphezulu amanyathelo Ukucamngca ngokudlul, ingakumbi utshintsho iifomati oluzinzileyo lwexesha elide.
Kuyabonakala ukuba, lo mngeni kule minyaka mibini izayo zezi nkampani hayi akhuphisana kwimarike, sobabini wacaca kwaye ezifanelwe yoshishino ngokusekelwe kumathuba. Neemeko eziphawula jikelele kweemarike ubugcisa, iingxaki ekuphumezeni ezintsha ukusebenzisana iimveliso angaphandle phantsi indlela BIM kwindawo yambetha yi incursion of izixhobo okusingqongileyo, uxhomekeko kwi web, lo nkobe kwiteknoloji asakhulayo njengoko Apple nengxolo ebangela iimarike saa kunye OpenSource.
Post edlulileyo«Edlulileyo Blogsy for Blogs ezivela iPad
Post Next Woopra, ukubeka iliso kwiindwendwe ngexesha langempelaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwi "Geofumadas: iminyaka eyi-30 ye-AutoCAD kunye ne-Microstation"
Luis Morales uthi:
Yiluphi ulwazi oluhle, qhubela phambili, sihlala sibukele ..